एसईई दिन नपाए पनि अरू परीक्षा दिन पाइयोस् | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
एसईई दिन नपाए पनि अरू परीक्षा दिन पाइयोस्
१२ असार २०७७, शुक्रबार ०९:२४
मेरो नाम महिमा रेग्मी हो । म अहिले १६ वर्षकी भएँ । पोखरा बिरौटामा बसेर मासबारमा रहेको डिज्नील्याण्ड एकेडेमीमा पढ्दै आएकी थिएँ । म २०७६ सालमा एसईई दिनुपर्ने विद्यार्थी हुँ । तर दुर्भाग्यवश कोरोना भाइरसको महामारीले हाम्रो परीक्षा स्थगित भयो ।
एसईई आउनभन्दा दुई महिना अगाडिदेखि होस्टेलमा बसेकी थिएँ । क्लासमा जहिले पनि राम्रो पोजिसनमा आइरहने भए पनि अझै धेरै नम्बर ल्याउन भनेर म होस्टेल गएँ । सबै साथीहरू त्यहीँ भएकाले पढाइसँगै रमाइलो पनि उत्तिकै हुन्थ्यो । सबैले भन्थे — एसईई भनेको फलामे ढोका हो, यसलाई पार गर्न गाह्रो हुन्छ तर पार चाहिँ जसरी पनि गर्नुपर्छ । यस्तो कुरा सुन्दा अलिकति जान्ने विद्यार्थी नै भए पनि मेरो मनमा कताकता डर लागिरहन्थयो । त्यसैले अरू सबै कुरा छाडेर पढाइमा मस्त हुने गर्थें म ।
परीक्षा दिइसकेपछि यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर प्लान बनाएकी थिएँ । ती प्लान सम्झँदा परीक्षा छिटो सकिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । म होस्टेलमा बसेर एसईईको तयारी गरेका बेला कोरोना भाइरसले विश्वभर महामारीको रूप लिइसकेको रैछ । भाइरसले यस्तो भयानक अवस्था ल्याउँछ भन्ने कुरा थाहा थिएन । होस्टेल बसेको दुई महिना बितेको थियो । जाँचका लागि लगभग पूरै तयारी पनि सकिसकेको थियो । २०७६ चैत ६ गतेदेखि परीक्षा हुने थियो । त्यसैले ५ गते बिहान खाना खाएर प्रवेशपत्र लिन सरसँग स्कूलको बसमा आफ्नो परीक्षा केन्द्र गयौं । तयारी सबै भए पनि घरीघरी डर लागिरहेको थियो प्रश्न कस्ता आउने हुन् भनेर ।
यताउता गरेर दिन बित्यो । साँझ परेपछि एसईई परीक्षा स्थगित भयो रे भन्ने तीतो समाचार सुन्नुपर्‍यो । यो खबर सुन्नासाथ म एक्कासि छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । मेरा सबै साथीहरू पनि त्यस्तै भए । त्यो दिन खाना पनि खान मन लागेन । मनमा के के कुरा मात्र खेलिरहे । हाम्रै पालामा किन यस्तो हुनुपरेको होला भनेर ।
भोलिपल्ट ६ गते बिहानै बिउँझिएँ । बिस्तारामै थिएँ । साथीहरू ड्रेस लगाएर बसेका थिए । उनीहरूले भने — महिमा, हामी आज यस्तै भएर परीक्षा दिन जान्थ्यौं होला है । अब यसरी ड्रेस लगाएर चित्त बुझाउनुपर्‍यो । त्यति बेला मेरा आँखा रसाएका थिए । मलाई सपना देखेजस्तो लाग्यो ।
परीक्षा दिइन्छ भनेर ढुक्क भएका थियौँ । परीक्षा दिन नपाएर फेरि घरमै फर्किएर परीक्षाको मिति कुरेर बस्नुपर्छ भनेर कसलाई थाहा थियो र !
एक वर्षसम्म मेहनत गरेर परीक्षा सकेपछि ढुक्क भएर काठमाडौं र मधेसमा भएका आफन्तकहाँ जान्छु, बिदा भएको बेला टन्न घुमेर रमाइलो गर्छु भन्ने सोचेकी थिएँ । तर भाइरसले मेरा सबै सपनाको हत्या गरिदियो ।
परीक्षा त दिन पाइएन पाइएन । त्यसमाथि लकडाउनले गर्दा घरबाटै बाहिर निस्कन पनि बन्देज भयो । सुरुको दुई-चार दिन त मलाई सपना जस्तो मात्र लागेको थियो । भर्खर के भयो भन्ने कुरा पनि याद नहुने । अलिकति झट्का लागेको थियो मेरो दिमागमा । तर अलि दिनपछि फेरि सामान्य अवस्थामा आएर घर बसेँ । पढ्न पनि थालेकी थिएँ । लकडाउन खुले लगत्तै परीक्षा हुनसक्ने भन्ने समाचार आएकाले मन नलागे पनि पढ्न बाध्य थिएँ । तर लकडाउनको मिति थपिदै जाँदा अब त यस्तै होला भनेर कत्ति पनि पढिनँ ।
परीक्षाबारेमा केही भनी पो हाल्छ कि भनेर कान ठाडो बनाएर समाचार पनि हेरिराखेकै हुन्थें । राम्रोसँग निन्द्रा नपुर्‍याई मेहनत गरेर अन्त्यमा फल लिन नपाउँदा नराम्रो लागेको छ तर पूरै देश संकटमा परेका बेला सरकारले परीक्षाबारे सोचेन, शिक्षामन्त्री केही बोलेन भनेर गनगन गर्न पनि मन लागेन । स्कूलबाट मिस सरहरूले फोन गरिरहनुहुन्थ्यो । परीक्षाको केही अत्तोपत्तो छैन भनेर सम्झाइरहनुहुन्थ्यो । पढ्न चाहिँ नछोड भनेर भन्नुहुन्थ्यो ।
अलि अगाडि त अनलाइन कक्षा लिने कुरा पनि गर्नुभएको थियो तर गाउँमा इन्टरनेट सुविधा नभएकोले मैले क्लास लिन सकिनँ । म मात्र हैन मेरा अरू साथीहरूको पनि असुविधाले गर्दा अनलाइन क्लास सम्भव भएन । त्यो कुरा यतिकै हरायो ।
दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै खबर नआएपछि कताकता अब परीक्षा हुँदैन होला जस्तो लाग्न थालिसकेको थियो । कक्षाको क्रियाकलापका आधारमा सबैको रिजल्ट निकाल्ने रे भन्ने पहिला पनि समाचारमा सुनेकी थिएँ । त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि अब के गर्ने त ठिकै छ जस्तो लाग्थ्यो । मेरो कक्षाका क्रियाकलाप राम्रै थिए तर अझै पढेर परीक्षा दिन पाएको भए झन् सोचेजस्तो नम्बर ल्याउन सक्थें भनेर मनमा नराम्रो पनि लाग्थ्यो ।
घरपरिवारमा पनि सबैले मलाई सम्झाइरहनुहुन्थ्यो — परीक्षा दिन पाइएन भनेर पिर नगर, तिमी एक जना मात्र होइन तिमीजस्ता कैयौं विद्यार्थी अहिले अलपत्र परिरहेका छन् । त्यसैले नराम्रो नठान । बरु समय मिलाएर पढाइका साथै अरू कुरा पनि गर्दै गर ।
खुसी पनि लाग्छ समय र परिस्थिति अनुसार सबैले आफूलाई सम्झाएको देख्दा ।
गुनासो पनि कोसँग गर्ने र ! सरकारले आफ्नो मनमर्जीले बन्द गरेको होइन । भाइरसले गर्दा परेको बाध्यता हो । अब एसईई परीक्षा नहुने नै भयो । बरु यो समयमा सरकारले तय गरेको लकडाउनको पालना गरेर देशको एउटा असल नागरिक हुने परीक्षा चाहिँ पास गर्नुपर्छ । एसईई परीक्षा त दिन पाइनँ तर स्कूलको परीक्षा रोकिएर लकडाउनमा घर बस्दा जिन्दगीका अरू परीक्षाका लागि चाहिँ तयार हुँदै गरेकी छु जस्तो लागिरहेको छ । आजसम्म सधैंभरि पढाइ पढाइ भनेर अरू केही काममा ध्यान नदिने म अहिले घरका सबै काम गर्न सिक्दैछु ।
विद्यार्थी भएका नाताले परीक्षा दिन नपाउँदा भित्रभित्र सरकारको निर्णयप्रति रिस पनि उठेको थियो । परीक्षा स्थगित गर्ने कुरा हाम्रो परीक्षा सुरु हुने मितिभन्दा एकदिन अगाडि मात्रै तय भएको थियो । पहिल्यै थाहा भएको भए त आफ्नो दिमागलाई त्यही अनुसार तयार गर्नुहुन्थ्यो । एकैचोटि झट्का लाग्दैनथ्यो होला तर अन्तिम समयमा आएर परीक्षा स्थगित भयो रे भन्दा हामीलाई रिस उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो । होइन र ?
भाइरसको त्रास छिटो सकियोस् । लकडाउन खुलेर परीक्षा दिन पाइयोस् भन्नु त भएन किनकि परीक्षा नहुने भन्ने निर्णय आइसक्या छ । तर आन्तरिक मूल्यांकन चित्तबुझ्दो होस्, त्यसमा झेल भयो भने फेरि परीक्षा नै लिइदिएको हुन्थ्यो जस्तो चुकचुक नहोस् । अनि थप अध्ययनका कक्षा विना कठिनाइ पढेर राम्रोसँग परीक्षा दिएर पार गर्न पाइयोस् । परीक्षा नहुने भएपछि मैले अब जाँगर नलागे पनि पढ्नुपरेको छैन । मेरो ध्यान नयाँ कुरा सिक्नेतिर लगाउन पाएकी छु । आशा गरौँ दु:खका दिन छिट्टै सकिनेछन् ।
के गर्न सक्दा रहेछौँ र हामीले !
१८ श्रावण २०७७, आईतवार १८:२०
लाल बहादुर लामा